Noocyada Apple ee waqooyi-galbeed | December 2019
Cunto kuleylka xagaaga iyagoo gacmahooda ku leh
Ugu Weyn Ee Noocyada Apple ee waqooyi-galbeed
Noocyada ugu wanaagsan ee geedaha tufaaxa ee Waqooyi-galbeed
Gobol kasta oo cimiladu waxay leedahay sifooyin gaar ah, oo aan dhammaan noocyada tufaaxa ku haboon. Si aad u korato geed beerta oo aad u fiican oo aad ka hesho wax soo saarka weyn, waxaad u baahan tahay inaad barato dhammaan muuqaalada tufaaxa tufaaxa. Maanta waxaannu dooran doonaa noocyada gobollada Waqooyi-Galbeed iyo in la tixgeliyo sifooyinka beerahooda.
Hababka ugu muhiimsan ee diyaarinta miraha yaanyada ka hor beerashada. Ma u baahanahay inaan iyaga Gaga dhigo, sida loo abuuro dhulka?
Sidee loo kariyaa cuntada kaabajka cagaaran ee cuntada? Rashinka, kalooriyada, adeega sawirada
Isku duub qaybinta PC 5 iyo PC 6 loogu talagalay broilers
Faa'iidada iyo qasaarooyinka ilaalinta digaagga baqashada
Gaadiidka - jilicsanaanta yar yar ee cufan yar oo la mid ah aboorka guriga, waxaa jira noocyo kala duwan oo dabiiciga ah. Dhibaatadu maaha mid yar. Waa run in aanay ku quudin dharka iyo alaabada guriga, laakiin dhirta beerta. Dadka waaweyni ma waxyeeleeyaan dhaqanka, laakiin waa la duubi karo - khatarta ugu weyn ee dhaqamada. Read More
Maxay guriyaalku u eg yihiin: sawirrada, sida looga baxsado guriga? Sida loo helo, meesha ay ku dhuumato iyo sida loola macaamilo si waxtar leh
Baradho "Sorokodnevka" oo badan oo badan: sharaxaad kala duwan, sawiro, talooyin sii kordhaya
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyada Apple ee waqooyi-galbeed 2019